स्वाधिनतामाथि प्रहार हुने ‘एमसीसी’ नामक बिकासे थैलो बहिष्कार गरौँ ! – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १६:२० English
स्वाधिनतामाथि प्रहार हुने ‘एमसीसी’ नामक बिकासे थैलो बहिष्कार गरौँ !
मुलुक यतिखेर प्रसव पिडामा छ । नागरिकहरु देशको गुमेको भुगोल फिर्ता ल्याउन सरकारको काधमा काध र हातमा हात मिलाएर हर्सोउल्लासका साथ तयारीमा छन् । सरकारदेखि चिया पसलसम्म, सडक देखि सदन सम्म राष्ट्रियताको बहस चलिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु एकस्वरले एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रियताको सवालमा योजना बनाइ रहदा नागरिकहरुले चौतर्फी रुपमा दिप प्रज्वलन गरेर स्वागत गरिरहेका छन् न। यतिखेर मुलुकको सरकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी छैनन् मात्र जनप्रतिनिधी छन् । मानौ यतिखेर सरकारका सैयौ गल्तिलाई नागरिकबाट माफी भएको छ ।
यति हुदाहुदै पनि नागरिक ढुक्क छैनन् । सरकारको खबरदारी गर्न कोरोना माहमारिको बेवास्ता गर्दै सडकमा जम्मा भएका छन् । एमसीसी नामक बिकासे थैलोले नेपाली स्वाधिनता र अस्मितामाथि प्रहार हुने भयले त्रसित छन् । आफ्ना प्रतिनिधिलाई एमसिसी जस्तो रास्ट्रघाती प्रस्ताव सांसदबाट अनुमोदन नगर्न सचेत गराउदै छन् । सरकारी सम्पतिको अनियमितता, अपारदर्शीता र फजुल खर्चको बिरुद्ध सडकबाटै आवज उठाउन लागि परेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले बेलैमा उचित संबोधन नगर्दा अर्को खतरा निम्तिन सक्ने भएकाले नागरिकदीर्घामा सन्त्रास पैदा गरेको छ ।
सदियौ देखि उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग मित्रवत समभाव राखेर अगाडि बढेको हाम्रो मुलुकले आफ्नो स्वाधिनता रक्षाको सवालमा कोही कसैसग संझौता गरेन । मुलुक भित्र समय समयमा जनस्तरबाट हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई शासकवर्गले आत्मासाथ गर्नुको सट्टामा त्यसलाइ रोकेर आफै आगाडी बढ्ने कुचेस्ठाको कारण मुलुकले ठुला ठुला क्षती ब्यहोर्नुपरेको छ। त्यसैको उपज हुन यि असमान संधी संझौता हरु। मुलुकलाई हराएर आफू जित्न बानी परेका शासकहरुका कारण उब्जियका समस्या बर्तामनमा पनि जिवितै छन। ढुट्टो सग चामल साट्न बानिपरेको छिमेकिलेनै आफ्नु मुलुकको स्वार्थ खातिर हाम्रो मुलुकलाइ अस्थिर बनाइरहदा दर्सक बनेर सहिरहने हामी नेपाली पनि कम जिम्मेवार छैनौ ।
असमान संधीसंझौता हरुको भुमरिमा फसेर कस्टकर जीवन बाँच्न बाध्य भएका हामी स्वाभिमानी नेपालीहरु मुलुकको स्वाधिनता सग साटियर आयको डलरको भरमा केहिदिन सुखी नेपाली हुनुभन्दा आफ्नै पौरखको भरमा दुख पाए पनी स्वतन्त्र र स्वधिन नेपाली भयर बाच्न मन्जुर छौ भन्ने उदघोष सडक र सामाजिक संजालबाट गरि रहेका छन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केही अग्रज नेताहरु नागरिक आवजको अवमुल्यन गर्दै एमसिसी जस्तो घोर असमान र आपतिजनक संझौता संसदबाट अनुमोदनगर्न आतुर छन्। जुन एमसिसी नामक सम्झौताले हाम्रो मुलुकको सार्मभौमशत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। हाम्र स्वघोषित केही माहन नेताहरु हाम्रो रास्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा माथी हुने खालको एमसिसी पास गरेर पाएको पैसाले देशबिकास गर्ने नालायक सपना देखिरहेका छन । रास्ट्रघात गरेर महलमा बस्नु भन्दा रास्ट्रप्रेम गरेर झुपडिमा बस्नु बेस भन्ने आवज नागरिक दिर्घाबाट उठिरहेको छ ।
मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतलाइ सहि परिचालन नगरी राज्यको ढिकुटिलाइ आफू र आफ्ना अनुकुल खर्चन बानिपरेका नेतृत्वगण र मुलुकको आम्दानीले पाल्नै नसक्ने जनप्रतिनिधि भएको देश नेपालमा भएको आम्दानी पनि जनप्रतिनिधिलाई तलव र भत्तामा खर्चनु पर्दा बिकास बजेटमा असर पर्नु स्वभाविक नै हो । मुलुक बिकासको सारथीको रुपमा आयको राज्यको पुनरसंरचनाले मुलुकको हित भन्दा बढी खर्च बढाउने काममात्र गरेको छ । राज्यको आम्दानी यत्र तत्र अनावश्यक ठाउमा छरिदा मुलुक बिकासमा प्रतिकुल असर परेको छ । मुलुक बिकासको महत्त्वपूर्ण कडिभनेको इमान्दार राजनितिक नेतृत्व र उस्को इच्छा शक्ति हो, न कि पैसा । मुलुकलाई आर्थिक संकट पर्दा बिसे नगर्चीको स्कुल पढन तयार हुनु पर्दछ, बिदेशिको गुलामी हैन ।मुलुकाकै आर्थिक संकट पर्दा आफना फजुल खर्चहरु कटौती गर्नुपर्दछ पराईसँग हात थाप्ने हैन । मुलुकलाई आर्थिक संकट पर्दा सरकारले भ्रष्टाचार रोकेर मुलुक बासिलाई सुशासन दिनुपर्दछ असमान संधी सम्झौता हैन । मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको बखत हामी हिमाली पाहडी र तराइबासी हैन मात्र नेपाली हौ । यो बेला हामी प्रदेशमा बिभाजित भयर हैन नेपालमा एकाकार भयर यो चरम आर्थिक संकट जित्न सक्छौ । दलीय र वादिय नारामा अल्जियका नेतृत्वहरु आज झै एक ठाउमा उभियर लाग्ने हो भने मुलुकको बिकास गर्न पक्कै पनि कठिन छैन । मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको बखत सरकारका कर्मचारी अत्यन्त जिम्मेवार र मितब्ययी भयर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने र नागरिक अनुशासित भएर सहयोग गर्ने हो भने हाल बयल गाडीको रुपमा चलेको मुलुक बिकासको गति क्रमशः रेल गाडिको रुपमा नचल्ला भन्न सकिन्न । इच्छाशक्ति र सुशासन भए मुलुकको बिकासगर्न गारो छैन भन्ने ज्वालन्त उदाहरण नेपाल बिद्धुत प्राधिकरण पनि हो । सरकारले आफ्ना स्वइच्छाचारिताको अन्त्य गरेर नागरिकलाइ बिकासका साझेदार बनायर लैजाने हो भने मुलुक बिकासको लागि छिमेकी लगायत अन्य मुलुकसित हात फैलाउन जरुरी छैन । मुलुकबासी मुलुकको बिकासकोलागि तयार छन् । सरकार तिमी आवहान गरेर त हेर । सरकार सहिदको खेती गरेर अब मुलुकको बिकास र संबृद्धी हुन्न , अब मुलुकको बिकास र समृद्धिको लागि औद्योगिक क्रान्ति कृषि क्रान्ति गर्ने बेला हो । यो बेला नेपाली युवा युवती बिदेश बेच्ने बेला हैन उनीहरुलाइ स्वदेशमा सम्मान पुर्वक ब्यवस्थापन गर्न्व बेला हो । नेपाली युवा बेदेशी भुमिमा कामदार बनायर पठायर मुलुक बिकास हुने भय, ती देश (जस्ले अन्य मुलुका युवा कामदार मगायर काम लगाए) सबै कंगाल हुनपर्ने हो । वीर गोर्खालिको नामले चिनियको हाम्रो देश दिनानु दिन युवा बिहिन देशको रुपमा परिचय फेर्दै छ । सस्ता कामदार उत्पादक देशको रुपमा नाम बदल्दै छ । इतिहासमा वीर गोर्खालिको नामले चिनियका हामी नेपाली आज किन निरीह भयर अनुदान र साहायताका भरमा बाँचेका नेपाली भनेर परिचय बनाउन आतुर छौ । मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मा कस्को ? सजिलो जवाफ छ, तपाईंहरु जस्तै अदुरदर्शी राजनैतिक नेतृत्वको। सरकार अनेत्र भौतारिनुको सट्टा आफू भित्रको कस्तुरिलाइ चिनौ र प्रयोग गरौ ।
दर्जनौ असमान सन्धी सम्झौताबाट पाठ सिकेका नेपाली नागरिकहरु किन एमसीसीको बिरुद्ध छन ? सडक र सामाजिक संजालबाट एमसिसीको बिरोध गर्नु नागरिकको रहर कि बाध्यता ? सरकारी नजरमा एमसिसीको बिरोध गर्नु मुर्खता हो भने आफ्नै आँखा अगाडि देश लुटाउनुचै बुद्धिमानी हो त ? हजारौ हजार नागरिकको बलिदानी र अंग भङ्गसँगै सशस्त्र जनबिद्रोह, सयुक्त जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त भयको राज्य ब्यबस्थाको बर्खिलाप हुने गरि आउनलागेको एमसिसी योजना के सहि हो ? नेपालको सम्सदबाट यो योजना पास भयपछी मुलुकमा अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपाली कानुन स्वत निष्क्रिय हुने ब्यवस्था नेपाली जनता र मुलुकको हितमा छ ? नेपालको आर्थिक बिकास र सुशासनको ढाचा एमसीसीको ढाचामा हुनपर्ने ब्यवस्थाले के मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्छ ? स्वाधिन मुलुकमा एमसिसि ले चाहेको हुने नेपालले चाहेको नहुने सम्झौता कुन हिसावले सहि छ ? मुलुकको कानुनलाइ ठाडो चुनौती दिने, उस्ले नेपाली कानुन मान्न नपर्ने कुराले देशको सिर ठाडो हुन्छ कि निहुरिन्छ ? मुलुकले रास्ट्र्य गौरवलो योजना मान्नपर्ने एमसिसिको नीतिनियम भने अमेरिकन हुने । कस्ता नीतिनियम बने र कसरी लागू हुन्छ भनेर नेपाली पक्षले सोध्न समेत नपाउने तर त्यसलाई मान्नपर्ने संझौताले नेपालको श्रीबृद्धी हुन्छ कि मान हानी ? अमेरिकी सरकारले चाहेको नेपाली भुभाग नेपालले दिनपर्ने तर किन भनेर सोध्न नपाउने कुराले बिश्व सामु मुलुकको साख गिर्छ कि गिर्दैन ? परियोजनाको नाममा हाम्रो बौद्धिक सम्पती माथी हडेप्ने पर्पन्चले हामिलाइ दुरगामी असर गर्छ कि गर्दैन ? अझ महत्त्वपूर्ण सवाल परियोजनाले जे जस्तोसुकै सामाग्री (हात हतियार लगायत का युद्ध सामाग्री) नेपाल भित्र्याउन चाहे पनि नेपाली पक्षले सोध खोज गर्न सम्म नपाउने कुराले हामिलाइ बिश्वजगतमा स्वतन्त्र मुलुकको पहिचान कायम गर्न मद्धत गरिरहन्छ ? उत्तर तर्फको छिमिकी मुलुकको सामु हाम्रो अस्तित्व के हुनेरु कतै हामी एमसिसिको नाममा मुलुकमा युद्ध निम्त्याउदैत छैनौ ? आज त मुलुकको सिमना भारत सरकार बाट अतिक्रमण भयको छ । सिमना रक्षा तथा फिर्ताको सवालमा मुलुकको सरकार कृयाशिल भइ आवाज उठाउदात आनाकानी गर्ने भारतिय सरकारले एमसिसी सम्झौता गर्दा समेत उसैको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रबाधानले मुलुकको रक्षा गर्न सक्ला ? हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व अमेरिकाले नस्विकारी भारतको स्वीकृति खोज्नुको रहस्य के हो ? आफुले गरेको लगानिको समेत सोध खोज गर्न नपाउने घोर आपती जनक संझौता नेपाली जनताको लागि कुनै पनि बाहनामा स्विकार्य हुन सक्दैन । सिमना रक्षामा सरकारको साथ भयका नेपाली जनता एमसिसी नामक राष्ट्रघात हुँदा चुप लागेर बस्दैनन्। मातृभुमिको खातिर आवस्यक परे फेरि एकचोटी बलिदान गर्न तयार छन ।
आफ्ना प्रिय मतदाताको मतको अपमान गरेर आफ्नै सरकारले अंगिकार गरेको पंचशिलको सिद्धान्त बिपरित मुलुकले अबलम्वन गरेको बिदेश नीति बिपरित,असम्लग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकुल हुदा समेत एमसिसि अनुमोदन गर्न लागि पर्नुको रहस्य के होरु अनेकौ असमान सन्धी सम्झौताहरु बाट पाठ सिकेर बिश्वोजगतमा आफुलाइ उत्तम राजनीतिग्यको दर्जामा उभ्याउने अवसरलाई नकारेर गल्ती माथी गल्ती गर्दै जाने राजनैतिक नेतृत्वलाई नेपाली जनताले के भन्ने ? आफ्नु मुलुकको हितमा भन्दा दोस्रो मुलुकको हितमा सम्झौता गर्न लालायित हुने हाम्रा माहन नेताहरु प्रती हामिले संका गर्ने कि विश्वास ? आफ्ना निहित स्वाथकालागी देशलाइ बलि चढाउन कत्तिपनी नहिच्किचाउने हाम्रो नेतृत्व बाट मुलुकबासिले के अपेक्षा गर्ने ? जन जनका मन मस्तिष्कबाट उठेका सावालको जवाफ कस्ले दिने ?
२ असार २०७७, मंगलवार १२:३२ मा प्रकाशित